Bogga ugu weyn Sida Loo Iibiyo Kaararka Hadiyada Online 2022
Kaarka aanad isticmaalin ama aad si buuxda u illowday, halkii aad ka takhalusi lahayd adigoo qashinka ku dhejinaya, waxaa jira sida ugu fiican oo dhan loo maro. Ku iibi kaararka hadiyadda online, kuwaas oo qaarkood aad ka heli karto ilaa 92 boqolkiiba qiimaha, goobo kala duwan.
Hagaag, in kasta oo laga yaabo inaadan soo celin kaadhka hadyada qiimahiisa oo dhan, way ka fiican tahay inaad lumiso ama aad qashinka ku tuurto.
Sidoo kale, runta naftaada u sheeg, inaad ku dhex tuurto kaarka khaanadaha ama meel boorsadaada buuxsan adigoo rajaynaya inaad mar kale isticmaali doonto, waxa laga yaabaa inaanay run ahaantii dhicin.
Haddaba maxaad kaararka hadiyadda ugu iibin weyday khadka? Ugu yaraan ma mari doontid khasaare boqolkiiba 100 ah. Haddii aad isticmaali karto kaadhadhkaaga hadiyadda ama aad soo furan karto, ama xitaa aad heli karto qiimo buuxa markaa taasi waa wax weyn! Laakin haddii aysan ahayn, waxaad leedahay qorshe gurmad ah - ku iibi internetka.
Aan ogaano sida!
1. Dooro yabooh
Shabakado badan oo halkaas ka jira ayaa kuu oggolaanaya inaad ku iibiso kaararka hadiyadda khadka tooska ah laakiin mid kasta oo iyaga ka mid ah wuxuu leeyahay shuruudo kala duwan. Qaar ayaa kuu ogolaanaya inaad kaarkaga wax ku iibsatid, qaarna way kaa iibsan doonaan ka dibna iyaga laftoodu way iibin doonaan.
Waa caqli badan tahay in marka hore la barbardhigo qiimaha bixinta ee goobo kala duwan haddii Hadiyad Kaarka Hadiyadda, Kor u qaad, Kaarka si loo hubiyo inaad hesho heshiiska ugu fiican.
Goobaha sida Suuqa Suuqa sidoo kale waxay kuu ogolaanayaan inaad ku iibiso kaadhadhkaaga hadiyadaha dhowr doolar oo ka hooseeya qiimaha wejigooda.
Waxa kale oo aad ka beddelan kartaa kaarka hadiyadda, beddelka hadiyad tafaariiqda oo aad dhab ahaantii isticmaali doonto. Xasuusnoow, doorasho kastaa waxay leedahay faa'iidooyin u gaar ah, markaa u tag waxa ku habboon baahiyahaaga.
2. Gudbi kaadhadhkaaga hadiyadda
Si toos ah kaararka hadiyadda onlayn lacag caddaan ah ugu iibi goobta kaadhka hadyada sida Clip Kaar, GiftCash ama CardCash.
Goobahan ayaa si toos ah u iibsan doona kaadhkaaga. Beddelka kale waa inaad ku taxdo kaadhka hadiyadda ciyaarta rogan ama Kor u qaad.
Goobahan oo kale waxay u dhaqmaan sidii goob suuq ah oo aad kaarkaga wax ku soo iibsanayso oo qof kaa iibsanayo. Sidoo kale, marka aad internetka ku iibiso kaadhadhka hadyada, waxaad isla markiiba heli kartaa xigashadaada si aad u ogaato inta uu le'eg yahay kaadhka hadyada.
XIDHIIDHKA: Reviews Caymiska Safarrada 2022 | Ma xalaal baa mise waa khiyaamo | Sida ay u shaqeyso
Haddii aad tahay raadinta lacag caddaan ah oo degdeg ah, si kastaba ha ahaatee, goobaha sida GiftCardBin ayaa lagula taliyay, iyagoo la shaqeynaya in ka badan 600 oo ganacsi si ay u iibsadaan kaararka hadiyadda - shakhsi ahaan. Si kastaba ha ahaatee, filo oraah aad uga hooseeyso haddii aad internetka ku iibiso kaararka hadiyadda.
3. La xaqiijiyo oo la bixiyo
Iyada oo ku xidhan adeegga aad dejisay, waxa lagugu bixin karaa jeeg boostada, PayPal, ACH ama waxa lagugu siin karaa hadyad waxtar leh.
Barnaamijyada lacag-bixintu aad ayay u degdeg badan yihiin, laakiin maskaxda ku hay qiimaha wax kala beddelashada ee taas la socota. Jeegaga ayaa qaadan doona wax yar ka dheer laakiin waa mudan yihiin in la sugo.
Iyada oo ku xidhan caadooyinka kharash-garayntaada, iibinta kaadhkaaga hadyada online kaarka hadyad kale waxa laga yaabaa inay noqoto waxa aad u baahan tahay. Gaar ahaan maadaama heerka beddelka uu noqon doono kan ugu sarreeya.
Doorashada kale waa in la ganacsado oo la helo kaararka hadiyadda. Waxa aad samayso waa kaarkaaga hadiyadeed ee aanad rabin iibiye aad jeceshahay oo aad hesho ilaa 0% dheeraad ah. Asal ahaan waa fal hibo siinaya qof si fiican uga faa'iidaysan lahaa.
Sidoo kale, waxaad haysataa ikhtiyaarka ah inaad u diwaangeliso kaarka hadiyadda qof kale inta lagu jiro xilliga fasaxa halkii aad lacag ku iibsan lahayd kaarka hadiyadaha kale ee aad jeceshahay.
Sida Loo Iibsado Loona Iibiyo Kaararka Hadiyadda Si Sharci ah
Caannimadooda awgeed, kaadhadhka hadyada si dhab ah ayaa looga iibsan karaa meel kasta, oo ay ku jiraan iibinta internetka.
Si kastaba ha ahaatee, helitaankooda fudud ayaa khatar weyn ku ah iibsadaha iyo iibiyaha labadaba iyadoo ku xidhan xeerarka iyo xeerarka caadiga ah.
Maadaama iibka iyo gadashada kaadhadhka hadyada ay hadda diyaar ugu yihiin khadka internetka, khiyaanada kaadhka hadyada ayaa si la mid ah kor ugu kacaysa.
Sidaa darteed waxaa muhiim ah adiga (gaar ahaan iibsade ahaan) inaad ka digtoonaato nooca boggaga aad doorato inaad ka iibsato kaararka hadiyadda sanadka 2022.
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyin dheeraad ah oo ku saabsan sida loo iibsado loona iibiyo kaararka hadiyadda sida waafaqsan xeerarka caadiga ah:
Ku iibso/ka iibso kaadhka hadiyadda kaadhka kaadhka
CardCash waxay ku imanaysaa anfaca markaad iibsanayso kaadhka hadyada oo aad rabto inaad dhaliso kayd dheeraad ah. Waxaad ku iibsan kartaa kaarar hadyad ah oo qayb ahaan la isticmaalay ama aan la isticmaalin lacag ka badan $10.
Interface-ku wuxuu kuu sheegayaa boqolleyda aad ku kaydsan doonto kaadhka hadyada la dhimay. Ogow, si kastaba ha ahaatee, marka aad alaab ku darto gaadhigaaga, waxaad haysataa 20 daqiiqo si aad u hubiso ama doorashadaada aan la sii hayn.
XIDHIIDHKA: Mike Lindell Net Worth 2022 | Taariikh nololeedka, Dakhliga, Xirfadda, Baabuurta
Iibinta iyada oo loo marayo CardCash waa mid ka mid ah fursadaha ugu habboon ee iibinta kaadhka hadiyadda ee internetka.
Geli magaca sumadda iyo cadadka kaadhka hadyada waxayna kuu soo jeedinaysaa. Waxa kale oo aad heli kartaa dalabyo kaarar hadiyadeed oo badan isku mar.
Kaliya xasuusnoow inaadan ka takhalusin kaadhka hadiyadda isla markaaba marka aad dhammayso wax kala iibsigaaga sababtoo ah waxay qaadan kartaa ilaa hal maalin si loo xaqiijiyo in kaadhka hadiyadu sax yahay.
Iibinta Kaarka Hadiyadda ee dib loogu soo celinayo Bakhaarka
Ka iibsashada kaadhadhka hadyada tafaariiqda si toos ah tafaariiqda waa fiican tahay, laakiin ka waran dib u iibinta? Badi tafaariiqleyaasha waxay aqbali doonaan soo celinta kaadhka hadyada haddii aad haysato rasiidka oo aan la isticmaalin kaadhka hadyada.
Kaararka hadyada ee la isticmaalay wax badan ma iibiyaan laakiin xaaladaha qaarkood, sharciga gobolku waxa laga yaabaa inuu kuu ogolaado inaad iibsatid kaadhadhka hadyada oo ay lacag yar kaga hadhay. Soo hel sharciga gobolka ee si weyn ugu shaqeeya iibinta internetka.
Maxay dadku u iibiyaan kaadhadhka hadyada?
Kaararka hadyada waa lambarka koowaad ee la codsado hadyada fasax kasta wakhtiga ugu dheer hadda iyo celcelis ahaan, qoysaska Maraykanku waxay haystaan ​​$300 kaararka hadiyadda ah ee aan la isticmaalin, ka dib iibinta kaararka hadiyadda ee internetka waa lacag caddaan ah oo degdeg ah.
Kaadhka hadyad ma leeyahay qiimo?
Tiro wanaagsan oo kaadhadhka hadyada ah waxay ku leeyihiin nambar lacag la'aan ah xagga dambe ee kaadhka si fududna waad u soo wici kartaa si aad u ogaato hadhaagaaga. Kaarka u rog dhinaca xariijimaha kaadhka madow oo hel lambarka taleefoonka ee kaadhka dambe ee kaadhka.
Waa maxay habka ugu faa'iidada badan ee lagu iibiyo kaararka hadiyadda?
Ganacsigu wuxuu noqon karaa mid faa'iido badan sababtoo ah waxaad si fudud u beddeshaa hadhaaga, suuqana wuxuu ururiyaa kharash yar. Laakiin, waxaa laga yaabaa inaad u baahato kaar hadiyadeed oo dalabaad sare leh sida Amazon, iTunes ama Starbucks si aad uga ganacsato. Haddii aysan jirin ganacsato kale oo raba kaadhkaaga, waxaad kasban kartaa iibin badan.
XIDHIIDHKA: How does Chime make money: Chime Business model?
Intee in le'eg ayay qaadataa in gacanta lagu helo lacag caddaan ah?
Iyada oo ku saleysan dib u eegistii hore ee goobaha, qaar ayaa ku siin doona lacag caddaan ah maalin gudaheed kuwa kalena toddobaad gudihiis. Hubi inaad sameyso shaqada guriga oo aad hesho mid adiga kugu habboon. Goobaha intooda badani waxay u shaqeeyaan si isku mid ah taas oo aad u baahan tahay inaad doorato calaamadda kaadhka hadiyadda, geli dheelitirka hadda, geli pinka ka dibna dooro qiimahaaga iibka.
Macaamiisha dukaanka onlineka ma u habeyn karaan qadarka iibsashada kaadhka hadyada?
Haddii macaamiil uu rabo inuu ku iibsado kaarka hadiyadda khadka tooska ah qadar aan iib ahayn dukaankaaga internetka, ka dib waxaad samayn kartaa codsi qabyo ah oo qadarka ah. Kadib marka uu macmiilku bixiyo, waxa aad siin kartaa kaadhka hadyada lacag la'aanta ah ee qadarkaas macmiilka ah.
Sideen ugu beddelaa kaarka hadiyadda jir ahaan nooca dhijitaalka ah?
Inta badan suuqyada internetka ayaa kaadhkaaga hadiyadeed u rogi doona nooc dhijitaal ah oo iibsaduhu ka iibsan karo onlayn ama daabacan karo. Xawilaadda dhijitaalka ah waxay isla markiiba u wareejisaa hadhaaga kaadhka iibsadaha waxayna sii wadaa iibinta khidmadaha ilaa ugu yaraan.
Sideen u wadaagaa kaadhka hadyada baraha bulshada?
Goobaha warbaahinta bulshada ayaa laga yaabaa inay kuu oggolaadaan inaad la wadaagto alaabada kaadhka hadiyadda adiga oo isticmaalaya xidhiidhka badeecada dukaankaaga khadka ah. Macaamiisha waxay ka iibsan karaan kaarka hadiyadda dukaankaaga onlaynka ah si ay u helaan koodka kaadhka hadyada.
Dhamaadka maalinta waxaa laga yaabaa inaad kasbato kaadhka hadiyadda mid ka mid ah apps-ka aad jeceshahay laakiin taasi runtii maahan kaarka aad raadinayso. Sidoo kale, waxaa laga yaabaa inaad u baahato lacag caddaan ah si aad biilasha u bixiso ama aad u maalgashato.
Nasiib wanaag, waxaa jira dhowr siyaabood oo aad lacag caddaan ah uga heli karto kaadhadhkaaga hadiyadeed ee aanad rabin ama aanad isticmaalin maanta. Isku day inaad ku iibiso kaararka hadiyadda online maanta, si aad u ogaato waxa adiga kuu shaqeeya!
10ka Meelood ee ugu Wanaagsan ee Lagu Iibsado Kaararka Hadiyada
Ma ku iibsan kartaa Kaararka Hadiyada Kaadhadhka Hadiyada? Ogow Sida
Anna Wintour Net Worth 2022 | Taariikh nololeedka, Dakhliga, Xirfadda, Baabuurta
Qiimaha saafiga ah: $50 Milyan Da': 72 jir Taariikhda Dhalashada: Noofambar 3, 1949 Dalka/Gobolka Asal ahaan: British…
Webull waa shirkad fintech ah oo Shiinees ah oo leh xafiis New York ah. Waa goob ganacsi oo ay samaysay Fumi...
Dib -u -fiirinta Ciyaaraha Barstool oo Buuxda 2022: Sidee Barstool Lacag U Sameysaa
Warbaahinta dhijitaalka ah ayaa helaysa tirooyin halis ah marka la eego isticmaalayaasha iyo aragtida. Iyadoo shirkado badan ay soo bandhigayaan alaabo cusub…
Sidee TFSA uga Shaqaysaa Kanada? | Tilmaan-Talaabo-Tallaabo Buuxi
Maaha meel ka baxsan in laga fikiro 'sida TFSA ay uga shaqeyso Kanada haddii aad damacsan tahay…
10-ka buug ee ugu qaalisan aduunka | 2022
Haddii aad jeceshahay inaad akhrido buugaagta, waa inaad dareentay in buugaagta qaar ay ka qaalisan yihiin kuwa kale.
15 Madal ee Ganacsi Hantida Online ee ugu Fiican Sanadka 2022
Markay timaaddo maalgelinta, qaar baa diyaar u ah inay halkaas ku laalaadaan muddada dheer. Waxay yihiin…